NMSQT टेस्ट युक्तिहरू र आधारभूत सूचना
PSAT को काउन्टर
तपाईंले परिमार्जन "NMSQT" संलग्नसँग पुन: सूचीबद्ध PSAT परीक्षणको बारेमा सुन्नुभएको हुन सक्छ। जब तपाइँले यो सुन्नुभयो वा देख्नुभयो भने, तपाईंले शायद आफैलाई प्रश्नहरूको गुच्छा सोध्नु भयो: NMSQT के लागि खडा छ? यो PSAT सँग किन संलग्न छ? मैले सोचेँ कि केवल परीक्षण थियो जुन तपाईंले एसएटीमा कसरी स्कोर गर्न सक्नुभयो भनेर देखाइएको थियो। यस परीक्षणको बारेमा मलाई किन चिन्तित हुनुपर्छ? किन सबैले प्राय: अक्षरों को धेरै छनौट परीक्षाहरु को उपयोग गर्न को लागी छ?
यदि तपाईं PSAT - NMSQT को बारेमा बढि जान्न चाहनुहुन्छ भने, म यहाँ मद्दत गर्न छु। यदि तपाइँ यसको बारेमा थप पढ्न चाहनुहुन्न भने, त्यसपछि अरू केही पढ्न जानुहोस्।
NMSQT के हो?
राष्ट्रिय मेरिट छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षण (NMSQT) PSAT परीक्षाको रूपमा एकदम सही कुरा हो। यो सही छ - तपाईले सामान्यतया तपाईंको उच्चतम विद्यालयको सोफोमोर र जूनियर वर्षको दौडान मात्र एक परीक्षा लिनु पर्छ। त्यसोभए किन अतिरिक्त अज्ञात? राम्रो, यो परीक्षणले तपाईंलाई दुई फरक परिणाम प्रदान गर्दछ: एक राष्ट्रिय मेरिट छात्रवृत्ति स्कोर र पीएसएटी स्कोर। त्यसकारण, राष्ट्रिय मेरिट छात्रवृत्ति भनेको के हो? यदि PSAT ले तपाइँलाई यसको योग्यता दिँदै छ भने, तपाइँ निश्चित रूपमा थाहा पाउनु के के हो?
NMSQT को लागि योग्य कसरी गर्ने
पहिलो कुराहरू पहिलो। तपाईंको PSAT / NMSQT स्कोरमा हरेक व्यक्तिले पहिले, तपाइँसँग निम्न कुराहरू तपाईंका लागि जानु पर्छ। यदि तपाई हो भने आफैंलाई बिन्दु दिनुहोस् ...
एक अमेरिकी नागरिक / इराकी अमेरिकी नागरिक
उच्च विद्यालयमा पूर्ण समय नामाकरण गरियो
आफ्नो जूनियर वर्ष को PSAT ले
एक बलियो अकादमिक रेकर्डको सामना गर्दै
NMSC छात्रवृत्ति आवेदन पूरा गर्न जाँदै
ओह! एक अर्को सानो कुरा ... तपाईंले खरानी परीक्षणमा राम्रो स्कोर गर्नुहुन्छ। त्यहाँ सँधै पकड हुन्छ।
पीएसएटी / एनएमएसएमटी स्कोर वे चाहते हो
तपाईंको NMSQT चयन सूचकांक, तपाईंको गणित, पढाई र लेखन खण्ड स्कोर (जो 8 र 38 बीचको बीचमा) निर्धारण गर्न को लागी थप्न सकिन्छ र त्यसपछि2द्वारा गुणा गरिन्छ।
PSAT एनएमएससी चयन सूचकांक 48 देखि 228 सम्म हुन्छ।
आलोचनात्मक पढाइ : 27
तपाईंको NMSQT अनुक्रमणिका स्कोर हुनेछ: 186
एक 186, तथापि, NMSQT देखि एक छात्रवृत्ति को लागि योग्य गर्न को लागि धेरै कम हुनेछ। प्रत्येक राज्य योग्यताको लागी न्यूनतम सूचकांक स्कोर छ, जुन उत्तरी डकोटा र वेस्ट वर्जीनिया जस्तै नयाँ जर्सीको लागी 2069मा न्यू जर्सी र सबै कोलम्बिया जिल्लाका लागि शुरु हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईं राष्ट्रिय मेरिट छात्रवृत्तिको फाइदामा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईं राम्रो PSAT को लागि तयारी गर्नुहुन्छ।
राष्ट्रिय मेरिट प्रक्रिया
छात्रवृत्तिहरू सामान्यतया नगद समावेश गर्दछ, तर त्यहाँ प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि दृश्यहरू पछि पर्दछ। एकपटक तपाईंले PSAT लिनुभयो र तपाईंको NMSQT अनुक्रमणिका स्कोर फिर्ता लिनु भएपछि, तीन चीजहरूमध्ये एक हुन सक्छ:
केही पनि छैन। तपाईंले नेशनल मेरिट छात्रवृत्तिको लागि अर्हता प्राप्त गर्न पर्याप्त उच्च स्कोर गर्नुभएन। बधाई छ। कहीं छेदमा क्रल जानुहोस् र आफैलाई सुत्नुहोस्।
तपाईं एक प्रतिबद्ध विद्यार्थी हुनुभयो। तपाईं अब राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्तिको लागी दौडमा हुनुहुन्न, तर जब तपाइँले तपाइँको कमेन्ट र अकादमिक रेकर्डको साथ चयन समितिलाई प्रभाव पार्नुभयो, तपाइँ अझै पनि व्यवसाय र निगमहरू द्वारा प्रायोजित अन्य छात्रवृत्तिको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ।
तपाईंले एनएमएस अर्मी फाइनलस्टाइको रूपमा योग्य हुनुहुन्छ। तपाईंले कटौती र टोपी गर्नुभयो भने, किनभने 1.5 मिलियन बाहिर मात्र 16000 परीक्षाले वास्तवमा यसलाई यो टाढा बनाउँछ।
त्यसपछि अर्ध-फाइनस्टिस्टहरू 15,000 फाइनलहरूमा तल हटाइनेछन्। त्यहाँबाट, 1500 फाइनान्सहरूले कर्पोरेट प्रायोजकहरूबाट विशेष छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन्, र 8,200 ले ओह-त-प्रतिष्ठित राष्ट्रिय मेरिट छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन्।
तपाईंले NMS प्राप्त गर्नुभयो भने के प्राप्त गर्नुहुन्छ?
प्रसिद्धि। शायद ब्राड पिट प्रकार होइन, तर नेशनल मेरिट छात्रवृत्ति समितिले तपाईंको नाम केही सुन्दर भारी जोखिमको लागि मिडियामा रिहा गर्नेछ। तपाईं सधैं एक तारा हुन चाहनुहुन्थ्यो, ठीक छ?
पैसा। तपाई एनएमएससीबाट $ 2,500 पाउनुहुनेछ, र दुवै कर्पोरेट र महाविद्यालय प्रायोजकका अन्य छात्रवृत्तिहरू। अन्य शब्दहरुमा, तपाईंको आमाबाबुले ठूला Stafford लोन को लागी अन्य प्रयोगहरू पत्ता लगाउन सक्दछ जुन उनीहरु तपाईको नाममा बाहिर गएका थिए, किनकी तपाइँसँग केहि नगद आउँदो हुनेछ।
ब्रैगिंग अधिकार। PSAT-takers को 0.5 प्रतिशत मात्र यो उत्कृष्ट छात्रवृत्ति प्राप्त गर्दा, तपाईं निश्चित रूप देखि केहि समय को लागि यसको बारे मा केहि गर्न सक्छन्। वा कम से कम जब कोही साँच्चै चिन्ता हुन्छ।
त्यो हो। NMSQT संक्षेपमा। अब अध्ययन गरौं।
टेनिस शटहरूको टाइपोग्राफी
कसरी सेमेस्टर दायाँ सुरु गर्नुहोस्
10 "टाइटैनिक" प्रागैतिहासिक पशु
नयाँ चन्द्रमा मनाउनुहोस्
कला सिर्जना गरेर तनाव र चिन्ता प्राप्त गर्नुहोस्
के राइट मिल्सको जीवनी
सबै समयको सर्वश्रेष्ठ देशको एल्बम सङ्ग्रह
समाजको विरुद्धमा के थियो?
1922 स्किन्डलर हाउस र आर्किटेक्चर जसले कसलाई बनायो
ओहियो बचाव राज्य कानून को बुझन शीर्षक कानून
लाखौंमा लावारिस पेंशनहरू फेला पार्न PBGC.gov प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईं देशको बारेमा के थाहा छैन समूह Rascal Flatts
तपाईंको प्रियंकाको लागि क्लासिक प्रेम कविता संग्रह
कालो इतिहास र जर्मनीको बारे थप जान्नुहोस्
Geometer Moths, Inchworms, र Loopers: Family Geometridae
जुलिया स्टेल्स फल्स "र प्रिन्स एन्ड मी" मा एक रयल को लागि
"ब्रम्बली एल्फ" मोनोलोजीको साथ आफ्नो अभिनय क्षमता जोड्नुहोस्